October 12, 2018 | Kichuu
Dubbiin Dhugaa tana : Dhaamsa Obbo Baqqalaa Garbaa (Dubbisaa waliif share godhaa)
Dubbiin Dhugaa tana Dhaamsa Obbo Baqqalaa Garbaa (Dubbisaa waliif share godhaa) ” Bara 1991/92 yeroo Oromoon injifatee ifa arguu jalqabe sana akkuma keessan har’aa dargaggoota tùrre. Waan gaarii muldhate arginee miira keenya tasgabbeessuu dadhabuu dhaan halkaniif [Read More]
Toleeraa Adabaa: Hidhannoo hiikkachuu Waraana Bilisummaa Oromoo irratti ejjennoon ABO maali? (bbcafaanoromoo)–Partilee karaa nagaan qabsaa’uuf biyyatti deebi’an keessaa dhimmi Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) hidhannoo hiikkachiisuu dhimma ijoo dubbii miidiyaalee idileefi kan hawwaasummaa tibba kanaa ture. [Read More]
Ethiopia: Addis Ababa incident raises questions over army loyalty Ethiopians have been reminded of life before Prime Minister Abiy Ahmed. Out of nowhere, mobile internet services were shut down across the capital and not a [Read More]
G7 and all political parties have the right to campaign in Oromia or elsewhere in Ethiopia.
G7 and all political parties have the right to campaign in Oromia or elsewhere in Ethiopia. They shouldn’t be deterred by anyone from freely doing their political campaigns in Oromia or any other states in [Read More]
Goota Lammiif Yaadu: Jaallee Kaffaaloo Tafarraa Wayyaaneen cubbuu fi badii malee
Goota Lammiif Yaadu: Jaallee Kaffaaloo Tafarraa Wayyaaneen cubbuu fi badii malee mana hidhaatti darbattee miilla isaa lamaan irraa kutte.Leenci saba isaaf yaadu Dr.Abiy immoo rakkoo isaa hubatee Wiilcharii Mootaraayzdii Automatic badhaaseeraan. Aboo jaalalli Dr.Abiy guyyaa [Read More]
Oromoo: Dageessanittu kunoo warra dhaaba hogganu. Uummanni isin kadachaat jira.
Oromoo: Dageessanittu kunoo…warra dhaaba hogganu. Uummanni isin kadachaat jira. Nuyi isin kadhannee dadhabnee as geessanii. Amma uummatarraa dhagahaa Oromoo: Hedduun sii dinqisiifadheera. Abba Qeerroo Kan itti miidhameef kan itti rakkate akkasitti dhukkubsee itti himaa dhuga jirtu dubbate. [Read More]
Leencoo Lataa, Farra fi Rimma qabsoo bilisummaa oromoo ti.
Leencoo Lataa, Farra fi Rimma qabsoo bilisummaa oromoo ti. Leencoo Lataa: Is still Amanuel Mental Hospital in Finfinnee is giving service? please help is needed for this guy!! Leencoo Lataa, Farra fi Rimma qabsoo bilisummaa [Read More]